OSA'n Afaan Oromoon fayyadamuu dhiisuun maalifi? - BBC News Afaan Oromoo
OSA'n Afaan Oromoon fayyadamuu dhiisuun maalifi?
Image copyright OSA
Korri Waldaa Qorannoo Oromoo (OSA) 33ffaa yeroo duraaf Oromiyaa keessatti taa'ame guyyoota sadiif dhimmoota adda addaarratti waraqaalee qorannoo dhiyeessaafi mari'ataa ture milkaa'inaan xumurameera.
Haata'u malee waraqaaleen qorannoo hedduun isaanii Afaan Ingiliziin dhiyaachuun hirmaattota biraa komii kaaseera.
Wayita uummanni Oromoo Afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa, akkasumas afaan qorannoofi qo'annoo akka ta'u gaafataa jirutti OSA'n kora isaa kan jalqabaa Oromiyaa keessatti taa'ame kana Afaan Oromoon gochuu qaba ture namoonni jedhan hedduudha.
Barattoonni Benishaangul Afaan Oromoon barachuufi
Namoota yaada akkanaa qaban keessa tokko kan ta'an hirmaataan kora kanaafi barsiisaan Yuunivarsitii Jimmaa Obbo Jiraa Mokonnin, OSA'n Afaan Oromoo fayyadamuun fakkeenya ta'uutu irra ture, hanqina guddaadha jedheen yaada jedhu.
"Kora idil-addunyaa waan ta'eefi namooti Oromoo hin taanes waan irratti hirmaataniif, akkasumas ammoo warrumti hundeessan hedduun warra biyyaa alaa jiraatan waan ta'aniif natti fakkaata," jedhu.
Afaan Ingilizii afaan addunyaati, afaan teeknoolojiiti sana fayyadamuun rakkoo hin qabu kan jedhan Obbo Jiraan, biratti garuu Afaan Oromoo fayyadamuutu irra ture yaada jedhu qabu.
"Afaan Oromoo jibbuu ykn tuffachuu miti"
Ganna lama dura pireezidantii OSA kan turan Dr. Tafarii Margoo afaan Ingilizii kan filatameef sababa lamaafidha jedhu.
OSA'n kora saayinsiiti. Afaan Oromoo ammoo sadarkaa barbaadamutti afaan saayinsii waan hin taaneef ittiin waraqaalee qorannoo saayinsawaa ta'an dhiyeessuun ni rakkisa jedhu.
Gama kaaniin dhamsi keenya akka dhaqqabu kan feenu Oromoo qofaa miti, warra afaan keenya hin beeknes ni dabalata waan ta'eefi jedhu.
Hanga Afaan Oromoo sadarkaa barbaadamutti afaan saayinsii ta'uutti afaanota lamaan walbira qabanii itti fayyadamuu akka furmaataatti akeeku.
Sun garuu dandeetti nama waraqaa dhiyeessuu irratti hundaa'a jedhan.
Kaayyoo OSA keessaa tokko Afaan Oromoo guddisuudha kan jedhan Dr. Tafariin, dhimmichi dhimma Afaan Oromoo jibbuu ykn tuffachuu akka hin taane dubbatu.
OSA warra hundeessanii fi pireezidantii lammataa kan turan pirofeesar Asaffaa Jaalataa komiin uummanni dhiyeesse sirriidha jedhu.
"Jaarmayaan OSA kuni jaarmayaa idil-addunyaati. Hojii jaarmayaa kanaa keessaa tokko fira uummata Oromoof horuudha," jedhu.
OSA'n magaala Finfinneetti giddugala akka banatu waamichi dhiyaate
Ameerikaa, Awurooppaa, Afrikaafi asuma Itoophiyaa keessaas fira Oromoodhaaf arguuf afaan isaan hubataniin dubbachuutu nurra jira jedhu hayyuun kun.
"Dirqamni lammataa OSA'n qabu uummata keenya barsiisuudha, uummata keenya barsiisuuf ammoo Afaan Oromoo fayyadamuu eegalleerra, fuulduratti garuu kana caalaa akka itti fayyadamuu dandeenyu itti yaadna," jedhan.
"Nuti warra biyya alaa jirru waan taaneef alagaatti rakkina Oromoo himaa waan turreef, afaanuma Ingiliziitti fayyadamaa turre, amma erga biyya keessa gallee garuu sana jijjiiruu qabna," kan jedhan ammoo Pireezidantii OSA haaraa filaman Dr. Beenyaa Dhugaasaati.
Bara dhufutti dhibbaa dhibbatti kun ni jijjiirama jedheen abdadha jedhu Dr Beenyaan.
'Ummatni Oromoo hir'ina jaarmiyaa hawaasaafi siyaasaa qaba'
"Afaan Oromoo beekumsa Oromooti. Beekumsa Oromoo dhiiftee, tuffattee waa'ee Oromoon qoradha jechuu hin dandeessu" jedhan.
Dr. Beenyaan geerarsa abbaa isaanii irraa dhagahan tokkoon ture fuulleffannaa OSA gara fuulduraa ta'uu waan qabu kan ibsan.
Moofaa uffattuu taanee
Doofaa of-gattuu taanee
Otoo qabnuu deegaa taanee...
As deebi'ee ammoo
Akkam taanee taanuree?
Kam gorree jalaa baanuree? jedha jedhan.
Ammaan dura OSA'n akkamiin akkas taane kan jedhu himaa ture, seena keenya sirriitti himanneerra, haata'u malee jiruun uummata keenya ammallee hin jijjiiramne kanaaf kan itti aanu kam gorree jalaa baanuree kan jedhudha jedhan Dr. Beenyaan.
Taakkalaa Uumaa OSA'n magaala Finfinneetti giddugala akka banatu dhaamaan
Pirof. Asaffaa Jaal'ataa: 'Ummatni Oromoo hir'ina jaarmiyaa hawaasaafi siyaasaa qaba'